Haween Somali-Maraykan lagu soo eedeeyey inay Alshabaab taageereen oo muteysan kara Xabsi dheer. | Baydhabo Online
Haween Somali-Maraykan lagu soo eedeeyey inay Alshabaab taageereen oo muteysan kara Xabsi dheer.
Maxkamadda Heerka Degmadda ee Gobalka Virginia ee K/bari ee dalka Maraykanka waxaa shalay la soo taagay Labo Haween Somali-Maraykan oo ay Dacwad-oogayaasha ku soo eedeeyeen inayururin jireen Lacago lagu taageero Xarakadda Alshabaab.
Muna Osman Jama oo 36 jir iyo Hinda Osman Dhirane oo 46 jir ah ayaa la sheegay in lagu helay inay abaabuleen Koox lagu magacaabo “Group of 15”, oo ay xubno ka yihiin Haween ka kala yimid dalalka Somalia, Kenya, Masar, Holland, Sweden, Britain iyo Canada, sida lagu sheegay Caddeyn ka so obaxday Xafiiska Xeer-ilaaliyaha Maryaknka ee Bariga Gobalka Virginia.
Baarayaasha ayaa sheegay inay Wada-sheekeysi Telefoonka oo ay ka duubeenKooxda Gabdhaha 15 inay muujinayso inay xiriir dhow la lahaayeen Xarakadda Alshabaab, waa sida hadalka loo dhigay.
Sidoo kale, Baarayaasha Maraykanka ayaa sheegay inay Muna Osman Jama iyo Hinda Osman Dhirane u direen Lacago dad ku sugan Kenya iyo Somalia, iyadoo la tuhunsan yahay in Lacagtaasi loo sii gudbiyey Alshabaab, waa sida ay hadalka u dhigeen.
Dhinaca kale, Dhowr Haween oo la eedeysnaa Haweenkaasi ayaa la shegeau inay baxsadeen, kuwaasi oo magacyadooda lagu kala sheegay Fardowsa Jama Mohamed iyo Bariira Hasasn Abdullahi.
Haweeney kale oo lagu magacaabo Farhiya Hassan oo qeyb ka ahayd Dacwadaasi ayaa lagu maxkmaadaynayaa gudaha dalka Holland.
Muna Osman Jama iyo Hinda Osman Dhirane oo la xiray bishii July ee sannadkii 2014-kii ayaa waxaa la filayaa in mar kale Maxkamadda la soo taago bisha Janaayo ee sannadka soo socda ee 2017-ka, iyadoo aad loo hadal-hayo inay labadooda muteysan karaan Xabsi min 15-sanno ah.